Nifarana ny Fihainoana teny amin’ny Fitsarana ireo Mpikatroka Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Nifarana ny Fihainoana teny amin'ny Fitsarana ireo Mpikatroka Saodiana	Voadika ny 29 Desambra 2012 23:21 GMT
Zarao: Notontosaina ny andron'ny 29 desambra 2012 tao amin'ny Fitsarana ady heloka bevava tao Riyadh, nandritra ny fitsarana ampahibemaso izay vitsy dia vitsy ao amin'ity firenena ity, ny fihainoana farany ireo mpikatroky ny zon'olombelona Saodiana roa malaza i Mohammad Al-Qahtani sy i Abdullah Al-Hamid. Tamin'ny fotoam-pihainoana farany [mg], nanontanian'ny mpitsara ny mpiaro, ary nitohy izany fanontaniana izany androany. Tokotokony ho 70 teo ho eo ny isan'ny nanatrika ka vehivavy ny telo. Nanatrika teo ihany koa ny solontena avy amin'ny Al Jazeera, Sky News ary n gazety nasionaly sasantsasany, izany hoe, teo anilan'ny Global Voices!
Teo am-panombohan'ny fotoana dia nomen'ny Dr. al-Hamid ny dika mitovin'ny bokiny vitsivitsy ny mpitsara, ka ny iray amin'ireo dia mitondra ny lohateny hoe “Mahery vaika noho ny bala ny teny,” nilazàny fa voaheloka noho ny fananana io boky io ny sasantsasany amin'ny mpikatroky ny zon'olombelona. Nilaza avy eo ny mpitsara fa nisy tatitra nilaza fa te-hiresaka amin'ireo mpikatroka roa izy. Nilaza ny Dr. al-Qahtani fa mila manopy maso [ny boky] izy, ka nahatsikaritra fa ny votoatin'ny tahirin-kevitra dia efa navoakan'ny mpisera Twitter iray tsy fantatra anarana izay nilaza fa manana fifandraisana ‘mampiahiahy’ ny mpikambana ao amin'ny Saudi Civil and Political Rights and Association (ACPRA na Fikambanana sy Zo Politika sy Sivily Saodiana):
التقرير الذي أتى به #القاضي_حماد_العمر في #محاكمة_حسم هو التقرير الذي نشره معرف الداخلية قبل مدة في #تويتر وقد ذكرت بأن ما ورد فيه كذب صريح.
@MFQahtani: Ny tatitra nentin'ny Mpitsara Hamad al-Omar teo amin'ny fitsarana androany dia efa navoakan'ny kaonty Twitter an'ny mpiasan'ny Minisiteran'ny Atitany efa fotoana elaela izay, ary lazaiko fa feno lainga.
Rehefa nanontanian'ny Dr. al-Qahtani ny mpitsara ny amin'izay loharanom-baovaon'ny tatitra dia nolazainy fa “malala-tanana” tsy nitonona anarana ary hitany tao amin'ny kapilany io.
al-Hamid (ankavanana) nifandray tanana tamina sembana mpanohana iray taorian'ny fotoam-pitsarana hitan'i @alajmi01
Notohizan'ny mpikatroka mirahalahy tamin'ny fomba nanaovana famotorana azy ireo ny resaka. Niteny ny Dr. al-Hamid fa nialoha ny hanombohan'ny famotorana dia nisy mpitsikilon'ny polisy nandalo tao an-tranony ka niteny fa manana “tahirin-kevitra goavana” entina hamelezana azy ary nanolo-kevitra an'i al-Hamid ireo mba hanakombom-bava izy. Nanitrikitrika ny Dr. al-Qahtani fa nanonona anarana ny mpanao famotorana raha manana fifandraisana amina fianakavian'ny mpanjaka iray “nahilika” izy, notononiny i Talal bin Abdulaziz, printsy iray nanana ny anjara toerana lehibe tamin'ny famoretana ny nasionalista Arabo nandritra ny taompolo 60. Nilaza ny Dr. al-Qahtani fa porofon'ny gidragidra misy ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka io, ary natao fitaovana ao anatin'izany gidragidra izany ny andrim-panjakana.
Rehefa nanontanian'ny mpitsara ireo mpikatroky ny zon'olombelona mirahalahy momba ny fandavany hankatò ny mpanjaka rehefa nanendry ny minisitry ny atitany teo aloha ho printsy mpandimby [mg] izy ary nanontany raha ara-drariny izany fandavana izany, dia niangavy ny mpitsara i al-Hamid hanome azy roa herinandro hanolorany valin-teny an-tsoratra ny fanontaniana izay ianteheran'ny mpitondra amin'izao fotoana. Ankoatra izay, nilaza izy:
أنت متعود يجيك المتهم خايف يحاول يتنصل. حنا ما عندنا شيء نخبيه
Mahazatra anao ny mahita ny tahotry ny olona voampanga ka miezaka ny miala vehana tamin'ny zavatra nataony. Tsy manana na inona na inona hafenina izahay.
Ankoatra izany, nangtaka tamin'ny mpitsara ny Dr. al-Hamid mba hanampy fotoam-pitsarana iray hafa ahafahany “manome porofo vaovao 11” hiarovany tena sy hanaporofoana fa ny polisin'ny minisiteran'ny atitany no tompon'antoka tamin'ny valin-kerisetra, saingy nandà izany ny mpitsara sady nanitrikitrika fa ity no fotoam-pihainoana farany.
Rehefa nandao ny efi-pitsarana ny solontenan'ny Sky News mba handrakitra an-tsar ny tatitra dia nisy polisy iray nisambotra azy sy ny mpaka sary ary dia nentina tany amin'ny komisarià ry zareo. Nanontaniana ny amin'ny fahazoan-dalana avy amin'ny manampahefana ahafahany manao tatitra fitsarana ampahibemaso ry zareo, na dia efa mpanao gazety manan-karatra amin'izany aza. Navotsotra ry zareo ora vitsivitsy taty aoriana rehefa nanasonia fampanantenana fa tsy haka sary ao anatin'ny lapan'ny fitsarana, na dia tsy nanao izany zavatra izany akory aza.
Ny fotoam-pitsarana manaraka hanambarana ny didim-pitsarana dia amin'ny 12 Janoary.
Tantaran'ny Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana farany 18 ora izayAfrika MaintyNy “Alice Any An-tanin'ny Fahagagana” Araka Ny isainan'ilay Libaney-Frantsay Mpitsoka Trompetra Azy Rehefa Atao Gadona Hip-Hop Opera